မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် မီးဖိုမီးမှ တစ်ဆင့် နွားစာပုံကို မီး ကူးစက်လောင်၊ အိမ် ၂၇ လုံး ဆုံးရှုံ - Yangon Media Group
မြို့သစ်မြို့နယ်တွင် မီးဖိုမီးမှ တစ်ဆင့် နွားစာပုံကို မီး ကူးစက်လောင်၊ အိမ် ၂၇ လုံး ဆုံးရှုံ
မကွေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့သစ်မြို့နယ် ဆူးတပ်ကြီးကျေးရွာတွင် မိခင်မရှိ ခိုက် မောင်နှမနှစ်ဦး မီးဖိုအား အသုံးပြုရာမှ နွားစာပုံအား မီးကူးစက်ကာ နေအိမ် ၂၇လုံးမီးလောင် မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒန့်ဒလွန်ပင် နယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မြို့သစ်မြို့နယ်၊ ဆူးတပ်ကြီးကျေးရွာနေ မသင်း(၁၉)နှစ်၊ ကိုထက်၊ (၁၄)နှစ်၊ မောင်နှမနှစ်ဦးသည် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြည် ဝင်း (၅ဝ)နှစ်မှ ခရီးသွားခိုက် မီးဖိုအား အသုံးပြုဟင်းချက်ရာမှ မီးဖိုနှင့် ငါးတောင်ခန့်အကွာ နွားစာပုံအား မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းကာ လူနေအိမ်များ ထပ်မံလောင်ကျွမ်း ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားရာသို့ မြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးဇော်မိုးလွင်၊ မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းဇင် ဖြိုး မြို့သစ်မြို့နယ်မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ်သုံးစီး၊ တောင်တွင်း ကြီးမြို့နယ် မီးသတ်စခန်းမှ မီးသတ်ယာဉ် နှစ်စီး၊ အရန်မီးသတ် ယာဉ်တစ်စီး၊ နတ်မောက်မြို့နယ်မှ မီးသတ်ယာဉ်တစ်စီး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့သစ်မြို့မရဲစခန်း၊ ဒန့်ဒလွန်ပင်ရဲစခန်းတို့မှ ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျေးရွာ နေပြည်သူများ ဝိုင်းဝန်းငြှိမ်းသတ်ကြရာ ည ၈ နာရီ ၄၅မိနစ်တွင် မီးလုံးဝငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ည ၈နာရီခွဲတွင် နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများနှင့် ရေသယ်ယာဉ်တစ်စီး ထပ်မံရောက်ရှိကာ မီးကြွင်းမီးကျန်များအား ဆက်လက်ငြှိမ်းသတ်ခဲ့သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် လူနေအိမ် ၂၇လုံး၊ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၁ဝဝ၈၄၅ဝဝခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံး ခဲ့ရပြီး လူသေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရမှုမရှိကြောင်း၊ လက်တွန်းလယ် ထွန်စက်တစ်လုံးနှင့် တိရစ္ဆာန် ဝက်သုံးကောင် မီးလောင်ခံခဲ့ရ ကြောင်း၊ မီးဘေးသင့်ပြည်သူ ၁ဝ၄ ဦးတို့အား ကျေးရွာရှိ ရွာဦးဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း၊ ကံဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် လယ်ပြင်ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတို့တွင် နေရာချထား ပေးပြီး မြို့သစ်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မီး ဘေးသင့်ပြည်သူများ၏ ညစာအတွက် စီစဉ်ပေးထားကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မီး လောင်မှုဖြစ်ပွားစေခဲ့သူအား ဒန့်ဒလွန်ပင်နယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၉/ ၂ဝ၁၈၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၂၈၅ဖြင့် အမှု ဖွင့်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်သူလူထုအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရန် ပဲခူးမြို့၌ ခုတင် ??
''လူငယ်တွေရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဟာသ ဇာတ်ကားတွေက ပြောင်းကိုပြောင်??
အိုင်အက်စ် အဖွဲ့၏ လူသစ်စုဆောင်းသူဟု ယူဆရသူကို သြစတြေးလျနိုင်ငံသား အဖြစ်မှ ဖယ်ရှား
ဗြိတိန်တစ်ဝန်းတွင် ၂ဝ၃ဝ ပြည့်နှစ်ထက် နောက်မကျစေဘဲ ဓာတ်ဆီနှင့် ဒီဇယ်ကားများ ပိတ်ပင်ရန် လန်??
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ထိန်းချုပ်ထားသော ကက်ရ်ှမီးယားဒေသတွင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြမှုဖြစ်
ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ ရေပန်းအစားဆုံး ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ဘရာဇီး
Adidas နဲ့ ပူးပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဖြစ်သွားတဲ့ ဘီယွန်းစေး